LemonDuck yakashanduka kurwisa Windows uye Linux makomputa | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft atumira chirevo chinopa zano kuti pane shanduko yeshanduro ye LemonDuck kuti, kuwedzera kuchera cryptocurrencies, iwe unogona ikozvino kuba magwaro, kubira kumashure mikova, uye kuita zvimwe zvakasiyana zviito zvakashata pamakomputa anotambura. Iyo yekutanga vhezheni yakawanikwa makore apfuura, asi zvayakaita kushandisa zviwanikwa zvematimu edu kuchera mari dzakadai seBitcoin. Iyo nyowani ine ngozi zvakanyanya, sekureva kweMicrosoft 365 Defender Threat Intellligence timu.
Uye nei tiri kutaura nezve izvi muLinuxAdictos? Nekuti hutachiona uhu inobatawo makomputa anoshandisa Linux. Pakati pehunyanzvi hwake hutsva, iye zvino anogona kuba zvitupa, kudzima chengetedzo kudzora, kutambanudza ehevha maemail, uye kuisa kumashure masuo kufumura makomputa kune ramangwana kurwisa kubva kune mamwe maturusi.
LemonDuck inogona kushandisa zvakasarudzika kusagadzikana
LemonDuck inogona kushandisa kusagadzikana kwekare kusati kwambomakwa. Pakati pezvikanganiso zvaunogona kutora mukana nazvo, isu tine:
CVE-2019-0708, inozivikanwa se / inoenderana neBlueKeep.
CVE-2017-0144, inozivikanwa se / inoenderana neEternalBlue.
CVE-2020-0796, inozivikanwa se / inoenderana neSMBBhost.
CVE-2017-8464, inozivikanwa se / inoenderana neLNK RCE.
CVE-2021-27065, CVE-2021-26855, CVE-2021-26857 uye CVE-2021-26858 inoenderana neProxyLogon.
Chinhu chinonyanya kufarira nezve iyi vhezheni yeLemonDuck ndechekuti inogona kubvisa vamwe vanopokana kubva munzvimbo. Ndokunge, pakomputa ine hutachiona, iri dhadha remoni edza kudzivirira kurwiswa nyowani nekukochekera mabhagi akafanana awakashandisa kuwana mukana kune ino sisitimu. Iyo hoarder uye ine udyire malware, asi isu hatisi kuzotaura zvakanaka nezve chero imwe yakaipa software.
Pakutanga, LemonDuck iri yakagadzirirwa vashandisi muChina, asi iri kushandawo muUnited States, France, Germany, United Kingdom, India, Russia, Korea, Canada, neVietnam. Kunyange Spain kana Latin America parizvino havapo pane irwo runyorwa, asi ino inguva yakanaka yekurangarira kuti zvakakosha kuisa, padiki, zvese zvigadziriso zvekuchengetedzwa kwatinoendeswa neLinux nekukurumidza sezvazvinogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inomutsa alarm: yakashanduka LemonDuck kurwisa Windows uye Linux makomputa
Mushandirapamwe uyu wakabata Exchange Server pakati payo shanduro 2013 kusvika 2019.
Mumaseva ane windows, kuda kuziva kuti nhau dzinodzokororwa neese yeyellow yekudhinda ndeyekuti inobata windows uye linux, asi kwete mac.
Cachis, panotova nemusika, isu tinofanirwa kutanga kutengesa antivirus uye kugonesa vanhu velinux kuti iyo superuser account haina basa, antivirus iri nani